पहिलो दिनदेखि नै भएको प्रहरीको लापरवाहीले उब्जायो विश्वासको संकट (#WhoKilledNirmala शृङ्खला ८)
2nd December 2018, 07:59 pm | १६ मंसिर २०७५
उनको छेउमै बसेका अर्का पुरुषले भने, ‘पुलिस आए भने त सबै मिलेर कुटेर खेदाउनुपर्छ।'
'अहिले त पुराना प्रहरी सबै फर्काएर नयाँ आएका छन् हैन र?' हामीले सोध्दा समेत उनीहरुको जवाफ थियो-'उस्तै त हुन् नि सबै।'
‘स्थानीयको सहयोग हुँदा प्रहरीलाई अनुसन्धानमा अत्यन्तै सहज हुन्छ,’ पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल भन्छन्, 'सहयोग भएन भने प्रहरीले अनुसन्धान त गर्छ तर निकै घुमाउरो र कठिन हुन्छ।'
त्यस्तै लापरवाही निर्मलाको घर पर्ने वडा प्रहरी कार्यालयका इञ्चार्ज इन्सपेक्टर जगदीश भट्टले पनि गरे। भट्टको घर पनि सोही वडामा छ। उनले राति ८ बजे नै निर्मला हराएको खबर पाएका थिए। तर, चासो लिएको देखिन्न। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘बिहान शव भेटिएर खबर पाएपछि मात्र घटनास्थल पुगेको हुँ।'
निर्मलाको शव भेटिएको उखुबारी लोकेन्द्र भट्टको हो। लोकेन्द्र जगदीशका भतिजा हुन्। समितिको प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्- 'लोकेन्द्र भट्ट र मेरो घर सँगसँगै छ।'
‘राति साढे १२ बजेतिर निर्मलाकी आमा आफै आएर घटनाबारे जानकारी गराएको हो,’यो प्रहरी चौकीका इन्चार्ज सई रामसिंह धामीले समितिलाई बताएका छन्, ‘रातिमा केटी मान्छेमात्र बसेको ठाउँमा जान नसकिने, भोलि बिहान जाउँला भनी पठाएको हुँ।'
दोस्रो दिन घटनास्थलको दृश्यले प्रहरी अझ 'नाङ्गियो'
विभागका प्रमुख एआइजी पुष्कर कार्की भन्छन्, ‘सोको अफिसरले घटनास्थल घेर्ने, रेखाङ्कन गरेर सुरक्षित गर्ने, प्रमाण जुटाउने, घटनाको विश्लेषण गर्ने काम गर्छ। घटनास्थलमा खटिनुअघि उनीहरुलाई ९० दिनको विशेष तालिमसमेत दिइएको हुन्छ।'
सोको अफिसर हरसिंह धामी गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिलाई भन्छन्,‘मैले त्यसो गरेको देखिनँ।'
घटनास्थल सुरक्षित नभए धेरै प्रमाण लोप हुनसक्ने पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन्। उनी भन्छन्,'घटनास्थल अनुसन्धानको लागि सुरक्षित हुनुपर्छ। मानिसलाई सहजै घटनास्थलमा छिर्न दिनुहुँदैन।'
उखुबारीभित्र प्रहरीले कसैलाई रोक्न सकेन। न त कुनै सीमा रेखा नै बनाइएको देखियो। शव भेटिएपछि घटनास्थल पुगेका वडा सदस्य रविन्द्र तिवारी भन्छन्,'मैले जगदीशलाई कति पटक भनेँ, सबै मानिस घटनास्थलमा गइरहेका छन्, रोक्नुेपर्‍यो भनेर। तर, उसले वास्तै गरेन।'
अब प्रश्न उठ्छ- घटनास्थलमा 'सर्वसाधारणको चित्त बुझाउन भए पनि कुकुर प्रयोग गर' भनेर संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयबाट एसएसपी विक्रम चन्दले एसपी विष्टलाई नभनेको या भनेर पनि विष्टले नटेरेको? अथवा 'कुकुर प्रयोग गर है' भनेर प्रदेश कार्यालयले संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयलाई नभनेको या भनेर पनि नटेरेको?
सर्वसाधारण प्रहरीको आलोचना गर्दै थिए, आइजीले त्यसैमा हो मा हो मिलाउँदै आफ्नै सङ्गठनका व्यक्तिलाई 'धमिरा'सम्म भन्न भ्याए। पपुलिष्ट भाषणमा नै उनी रमाए।
बरु, प्रहरी आफू अनुसारको व्याख्या गर्दै कहिले घटनास्थलको फोटो, कहिले अभियुक्त दीलिपसिंह विष्टको भिडियो ‘लिक’ गरेर, कहिले मास डिएनए टेस्ट गर्दैछौं भन्दै 'प्रोपोगान्डा' मच्चाउन खोज्छ। तर, हरेक पटक उसको प्रोपोगान्डा उसैलाई ‘ब्याकफायर’ भएको छ।